प्रचण्ड–बाबुरामलाई हत्कडी लागेपछि मात्रै बुबाको अन्तिम संस्कार गर्छौं : नुरप्रसाद – Maitri News
काठमाडौं। गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरण न्याय निरुपणको इतिहासमा अनौठो नजिर भइदिएको छ। यो प्रकरणबारे नियमित अदालतमा मुद्दा चल्यो। राजनीतिक संरक्षणमा आरोपीहरुमाथि सामान्य भन्दा सामान्यस्तरको कारबाहीसम्म भएन। उल्टै छोरा न्यायका लागि संघर्षरत बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीको अनसन बसेकै शैय्यामा निधन भयो भने आमा गंगामाया १२ पल्ट अनसन बसेकी छन्। किटानीसहित जाहेरी परेकाहरुमाथि सामान्य कारबाही नगरेको न्याय प्रशासनले कृष्णप्रसादका दाजु नुरप्रसादलाई भने पुर्पक्षकै लागि भनेर झण्डै २६ महिना जेल राख्यो। यसले न्यायालय र न्याय प्रशासनमाथि शंका मात्रै उब्जाएन न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा आघात पुर्या‍एको छ। हालै जेलमुक्त भएका नुरप्रसादसँग जेल जीवन र न्याय निरुपणमा भएको प्रगतिबारे प्रस्तुत छ सोहि कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रश्नः कहिले जेल मुक्त हुनुभयो ?
जवाफः मंसिर २३ मा ।
जवाफः किन छैन ? प्रहरी छ, अदालत छ । सबै संरचना छन् त १ मलाई पुर्पक्षका लागि २७ महिना जेल राखिन्छ भने किटानी जाहेरी पर्दा पनि हत्या आरोपीलाई सामान्य खालको औपचारिकता पूरा गर्ने काम मात्रै भयो नि त १ यहाँ न्याय कहाँनेर देखिन्छ भन्नुस् न । दण्डित गरिएन । नाटक गरियो । यसो भए पछि सबै सुरुबाट गर्नु परेन । गरे के सम्भव छैन । चिहानबाट हड्डी निकालेर पनि न्यायिक प्रक्रिया पूरा भएका इतिहास छन्, छैनन् र ?
जवाफः समयलाई दोष दिएर उम्किन पाइँदैन । ६ महिनामा गर्ने भनेको काम १५ वर्षसम्म पनि पूरा नहुने । १५ वर्षपछि पनि त्यही भनेर उम्किने । मेरो भाई के युद्धमा मारिएको हो र रु नियोजित हत्या भएको हो । मेरो भाइपछि मेरो मामाको छोरालाई पनि मार्न खोजेका थिए । मैले बचाएर ल्याएको हो । पीडित र अपराधी दुबै मरिसकेपछि न्याय निरुपण हुन्छ, यहाँ ।
जवाफः मान्दिन । त्यो मान्ने कुरै भएन । नयाँ प्रक्रिया थाल्न के आपत्ति छ र रु थुन्नलाई प्रमाण नहुने भन्ने कुरै भएन । मैले गोली हानेको हुँ भन्ने मान्छे युरोपमा लुकेर बसेको छ त । १३ जनाको नाम किटान गरेरै दिएको हो नि, जाहेरी ।
प्रश्नः पुनरावलोकनबारे केही परामर्श भएको छ, तपाईसँग रु
जवाफः मेरो किटानी जाहेरी अनुरुप कामै भएन । अपराधीहरुसँग उभिएर म किन अदालत जाने रु लहैलहैमा लागेर म जाने कुरा भएन । प्रचण्डले संसद नै बन्द गरे । राज्यको न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारे । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार नै ढाले । गणेश राईको अध्यक्षतामा गठन भएको छानविन समितिले केही गरेन । त्यहीँबाट प्रहरीको पनि विश्वास रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो । सुरु अदालतमै अन्याय हुन्छ भने माथिल्लोमा के होला रु जिल्ला अदालत चाँहि अदालत होइन र रु फौजदारी मुद्दालाई पनि देवानी मुद्दा बनाउने । लेनदेनको कुरा गर्ने ?
जवाफः यहाँ थुनेर सडाउने प्रवृत्ति छ । अनि कसरी मिल्ने । विन्दु घतानीको मुद्दामा मलाई फौजदारी अभियोग लगाए । बाँदरमुढे घटनामा पनि त्यस्तै दबाब आयो । उसै परे ज्यान मार्नेसम्मका गतिविधि चले । अहिले न्यायलयमा प्रवेश छैन । प्रशासनिक निकायमा निषेध गरिएको छ । मानवअधिकार आयोगमा रोक लगाइन्छ । अनि कसरी हुन्छ कुरा रु न्यायालयले गरेको व्यववहार झन् डरलाग्दो छ । पार्टी कार्यालय र घरबाटै फैसला तयार पारेर ल्याइँदो रहेछ, मैले देखेँ, भोगे ।
जवाफः अक्षम्य कुरा कसरी सहने ? र, सोच्ने रु रणनीतिक र कुटनीतिक कुरा बुझ्न सकिँदैन रहेछ । न्याय दिने कुरा कतै सुनिएन । सत्तामा बस्ने कम्युनिष्टहरुले आफुपनि गरेनन् । अरुलाई पनि गर्न दिएनन् । सुशील कोइरालाले कारबाही गर्न खोज्दा तिमि पनि हिजो विमान अपहरण गरेको थियौं, तिमि पनि अपराधि हौ भनेर संसद, सडक बन्द गराउने प्रचण्डलाई हत्कडी लगाउनु पर्दैन । बुबाको लासले प्रचण्ड–बाबुरामलाई जेल ल्या भन्छ, भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छुँ त । जबसम्म प्रचण्ड–बाबुराम जेल पर्दैनन् र मेरो सास रहेसम्म बुबाको लास जल्दैन ।
Previous Previous post: ऊर्जाका अन्य स्रोत बन्द गरी विद्युतको खपत बढाउनुहोस्, लोडसेडिङ इतिहास भयोः हितेन्द्रदेव शाक्य
Next Next post: पूर्वमाओवादी सांसद् ओली पक्षमा, लुम्बिनी प्रदेशमा तरङ्ग